अजिंगरले आमालाई जिउँदै निलेपछि छोराहरुले यसरी निकाले (हेर्नुहोस् भिडियो), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
अजिंगरले आमालाई जिउँदै निलेपछि छोराहरुले यसरी निकाले (हेर्नुहोस् भिडियो)
रोचक। सर्पले मानिसलाई टोक्नु साधारण कुरा हो । विषालु सर्पले टोकेपछि मानिसको उपचार समयमै हुन नपाएका कारण उसको मृत्यु भएको समाचार हामीले सु्न्दै र पढेकै आएका छौं । तर इण्डोनेसियाको दक्षिणपूर्वी सुलावेसीमा निकै आश्चर्यजनक घटना भएको छ । खेतीको कामका लागि घरबाट निस्केकी एक महिलालाई एउटा अजिंगरले जिउँदै निलेको छ । लामो समयसम्म महिला घर नफर्केपछि परिवारले उनको खोजी सुरु गरे ।
घटना १४ जूनको भएको बताइएको छ । अजिंगरको आक्रमणको शिकार भएकी महिलाको नाम ‘वा टिबा’ भएको बताइएको छ । उनी लामो समयसम्म घर नपुगेपछि उनका परिवार चिन्तित भए । भोलिपल्ट उज्यालो हुनासाथ खोजी सुरु गरियो । केही बेरमै टीबाको चप्पल, कोदालो र टर्च झाडीमा भेटियो । तर यसपछि जे भयो त्यो निकै डरलाग्दो थियो ।
टीबाका छोराछोरीले देखे कि त्यहाँबाट थोरै दूरीमा एउटा विशाल अजिंगर थियो जसको पेट निकै फुलेको थियो । अजिंगलरले सबैभन्दा पहिले महिलाको टाउकोमा आक्रमण गर्यो र खायो । पूरै महिलालाई निलेका कारण ऊ आफ्नो साधारण गतिमा पनि हिँड्न सकिरहेको थिएन । यस्तो देखेपछि त्यहाँ भएका सबै निकै डराए । बिहान ९ बजेसम्म त्यहाँ सयौं मानिसहरु जम्मा भए ।
त्यहाँ जम्मा भएका मानिसहरुले अजिंगरलाई मारेर उसको पेट चिरे । अजिंगरले सबैभन्दा पहिले महिलाको टाउको खाएको थियो जसका कारण उनको टाउको अजिंगरको तल्लो भागमा भेटियो । महिलाको पूरा शरीर कपडासमेत अजिंगरभित्र भेटियो । अजिंगरको लम्बाइ करिब २७ फिट भएको बताइएको छ । महिलालाई भने जीवित निकाल्न नसकिएको बताइएको छ ।
हेर्नुहोस् महिलालाई अजिंगरको पेटबाट बाहिर निकाल्दै गर्दाको भिडियो: